Ii-Boutique Self-Contained Motel Apartments e-Moree - I-Airbnb
Ii-Boutique Self-Contained Motel Apartments e-Moree
Ungarhoxa simahla ngaphambi kwe-23 Dis.
Indawo yam (i-Baths Motel) ikufutshane neepaki, iivenkile zokutyela, embindini wesixeko, iziko elidumileyo lamanzi, isikhululo setreyini. Uza kuyithanda indawo yam ngenxa yeebhedi ezitofotofo, ikhitshi elincinci, ubutofotofo, izinto eziyimfihlo zeflethi yakho, I-WI-FI YASIMAHLA, indawo yokupaka esimahla, indawo yokutyela kaMichael ethandwayo esayithini, ukhuseleko, indawo yokuphosa amatye ukusuka kwiziko lamanzi lobugcisa. Indawo yam ilungele abantu abathandanayo, abathanda ukuhamba bodwa, abahamba ngezoshishino, kunye namaqela amakhulu.
Ndineeflethi okanye izindlu ezikwicomplex eziyi-16 ezisandul 'ukulungiswa (i-Baths Motel) ezikwisitrato esithuleyo esibheke kwi-Hot Springs edumileyo. Indawo yam ikhethekile kuba idibanisa abantu abaninzi ababangela umdla ibe yenza abantu bazive bekhululekile. Ezinye zeendwendwe zam ziquka: iindwendwe zeveki nganye ezihamba phakathi komhlaba ukuze zihlambe kwimithombo eshushu yezindlu zazo zonyango, usuku olunye lokumisa iindwendwe ukuze zihambe ngemoto ixesha elide, iipakethi zamazwe ngamazwe zisebenza kwindawo etyebileyo yezolimo.
4.42 · Izimvo eziyi-103
Kwivenkile yam ethengisa ukutya kukaMichael iseyadini ibe ithandwa ngabantu basekuhlaleni ngenxa yokutya kunye nenkonzo yabo emnandi. Ngqukuva kwendlela liziko lamanzi le-Artesian elitsala iindwendwe ezininzi ezivela eOstreliya nakumazwe ngamazwe (iziko lisandul 'ukulungiswa nge- $ 8million). Ngaphezu koko, iWarialda St yiJellicoe Park emangalisayo, elungele ukuhambahamba kwindawo entle, ipikniki yosapho, umdlalo wezemidlalo, ukubukela iintaka okanye ukuhlala ngasemlanjeni iMehi.
Ndizama konke okusemandleni am ukunceda iindwendwe xa kufuneka...ngamanye amaxesha oku kunzima ngeshedyuli yam yomsebenzi.